Yenza ukufiphala kwividiyo ngeAdobe yeNkulumbuso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza ukufiphala kwividiyo ngeAdobe Premiere
Yenza ubumfama kwividiyo eneAdobe INkulumbuso Yinto elula kakhulu ukuyenza kwaye enokusinceda kuyo yonke into yethu iiprojekthi eziviwayo. Namhlanje, ukufiphala kunokwenziwa ngayo nayiphi na ikhamera ye-reflex kodwa kumaxesha amaninzi siya kufumana iividiyo apho sifuna khona sebenzisa ukufiphala emva kokuba urekhode ividiyo.
Faka izibhengezo kwiividiyo zakho ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ukufezekisa eso siphumo ukhangele kakhulu enkosi kwinkqubo Inkulumbuso, Inkqubo enobuchule kakhulu. Thatha ulawulo ngakumbi lokuhlela ividiyo.
Un fiphaza ihlala isetyenziswa njenge into yokudibanisa phakathi kweenqwelomoya ezimbini ngendlela ye inguqu kodwa inokusetyenziswa njenge Iziphumo zento ephathekayoUmzekelo, ukuba sifuna ukumela ukuba umntu unesiyezi kwividiyo, sinokusebenzisa le blur. Inokusetyenziselwa ifayile ye isingeniso kwividiyo okanye qaqambisa into ethile kwinqwelomoya. Nokuba yeyiphi injongo, obu buchule buhlala bufana.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile yenza isiphumo sethu sokufiphala ukuvula ifayile yethu yevidiyo kwiNkulumbuso. Nje ukuba ifayile ivuleke siya kuyisa kumda wexesha kwaye sijonge kwimenyu ekhohlo kwifayile ye- ikhathalogu yeziphumo zevidiyo, ngaphakathi kule khathalogu siya kufumana i- Icandelo le-Blurs. Kulo mzekelo siza kusebenzisa Ukukhanya kweGaussia.
ukuba sebenzisa ukufiphala Kufuneka sitsale kwividiyo yethu, ngokuzenzekelayo ividiyo yethu iya kuba nayo loo nto. Into elandelayo ekufuneka siyenzile kukunika kabini konqakrazo kwividiyo apho sifake khona isiphumo kwaye ukhethe kwifayile ye- ibha ephezulu ukhetho lolawulo lwesiphumo.
Nje ukuba ungene ngaphakathi iiparameter zesiphumo sokufiphala kufuneka siqale yenza amagama aphambili ukufaka i-blurs kuphela kwezo ndawo. Kwimeko yokungakhangeli okungaphezulu kwesinye kodwa ngokubanzi (ekuqaleni kwevidiyo ye-mono) asenzi iifayile eziphambili kodwa siya kufaka ngokuthe ngqo ukufiphala, ukuba sifuna ukudala ezininzi ukufezekisa ukusebenza kwegradient.
Ukuba sijonga ngokusondeleyo kwimenyu sinokubona iwotshi, Siza kuyisebenzisa le wotshi ukuqala inqaku lokufiphala kwenqaku. Inkqubo yokwenza Amagama aphambili ngelixa ususa ixesha luhlaza ukuba sibona phezulu.
Cinezela iwotshi ukuqala umphumo, emva kwale ssikhetha isangqa esincinci esisibona ngasekunene. Sihambisa ibha yexesha yevidiyo yethu kwaye sakha amagama aphambili kwiindawo esinomdla kuzo. Into yokugqibela esiyenzayo kukuhambisa ibar ezantsi kwewotshi ukusebenzisa isiphumo sethu sokufiphala kwinqanaba elikhulu okanye elincinci, singawahambisa amanqaku Ukufikelela kwisiphumo esifanayo. Ukuba sifuna sinako sebenzisa ukufiphala usebenzisa imilo emiselweyo de INkulumbuso (i-ellipse kunye nesikwere) ukuba into esiyikhangelayo kukungafani ngqo sinokwenza ukhetho ngepeni.
Yenza ukufiphala kwividiyo ngeAdobe Premiere yinto enokubusindisa ubomi bethu kwiiprojekthi ezininzi zokumamela, ngenxa yeso sizathu kuyimfuneko uyazazi ezi ntlobo zobuchule ukuba sigxile ekuhleleni ividiyo kunye nale okanye nayiphi na enye inkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yenza ukufiphala kwividiyo ngeAdobe Premiere